Warbixin: Maxaa lagu maagay Qadar yaa se ku guulaysan doonna dagaalka siyaasadeed ee Gacanka ? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Warbixin: Maxaa lagu maagay Qadar yaa se ku guulaysan doonna dagaalka siyaasadeed...
Warbixin: Maxaa lagu maagay Qadar yaa se ku guulaysan doonna dagaalka siyaasadeed ee Gacanka ?
Waa Daaraha dhaadheer ee dalka Qadar
Dowladda Sacuudiga iyo dowladaha Carbeed ee horay xiriiirka ugu jaray dowladda yar ee Qatar ama Qadar, ayaa waxay ka soo dabceen go’aankoodii iyaga oo markii hore Qadar hor dhigay 13 sharuudood kuwaasi oo ay ku sheegen in haddi ay fuliso ay la heshiinayaan.
Diblomaasiin u kala dhashay Sacuudiga, Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar ayaa waxay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Network waxay kaga dhawaaqeen in ay ka noqdeen 7 qodob hadda Qadar ay kali ah ka doonayaan in ay fuliso 6 qodob oo waaweyn.
Lixdaan qodob ayaa waxaa ka mida la dagaalanka argigixisad iyo xagjirka iyo in Qadar ay joojiso kicinta iyo boorinta xagjirnimada.
Ilaa iyo hadda Qadar kama ay san jawaabin warka ka soo baxay dowladahaan iyada oo markii hore iska fogeysay in ay taageerto argigixisada.
Qadar ayaa horay ugu gacan seertay dalab ay u soo gudbiyeen dowladaha xiriirka u jaray waxayna dalabkaas ku tilmaantay in uu meel ka dhac ku yahay madaxbanaanideeda iyo qaranimadeeda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Qadar ayaa horay u sheegay in 13 ka qodob markii lasoo saarayayba loogu talo galay in ay diidan islamarkaana ay iska diideen, isaga oo sheegay in dalkaasina uusan waan-waan ka gali doonin madaxbannaanidiisa.
Qodobada ay horay Sacuudi Carabiya iyo xulafadeeda ay soo saareen waxaa ugu waa waynaa inay xiriirka u garto dowladda Iran, inay xirto xarunta militari ee Turkiga uu ku leeyahay Qadar, inay xirto telfiishanka Aljazeera, inay joojiso taagerada Xamaas, Xisbullah iyo Ikhwaanus Muslimiin iyo kuwo Kale.
Dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Bariga Dhexe ayaa talaabada ay shalay Ku dhawaaqeen Sacuudi Carabiya iyo xulafadeeda ay muujinayso inuu jiro wax u muuqda ‘tanaasul’ iyo in dagaalka diblumaasiyadeed ee Gacanka inay u muuqato in Qadar ay ku guulaysanayso.
Qadar ilaa iyo hadda ma samayn wax tanasul ah ayadoo Ku dhegtay hadalka ah ” gorgorran kama galayno madaxbanaanideena.
Waa maxay GCC
Wadamada la isku yirahdo (GCC) Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Carabina lagu yirahdo (مجلس التعاون لدول الخليج‎‎), ama Gulf Cooperation Council.
Waxaa ururkan xubnihiisa ay kala yihiin Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates kaasi oo la aas-aasay 25 May, sanadka markii uu ahaa 1981 waxaana socda dadaalo loogu soo biirinayo dalalka Marooko, Yemen iyo Jordan ama Urdun.
Waa qariiradda dalalka GCC
Sanado ka hor dalkan waxay go’ansadeen in ay mideeyaan dhaqaalaha Militariga iyo siyaasadda ayagoo taas Ku doonayay in barriga dhexe ay ka ilaaliyaan in Iran ay saamayn Ku yeelato dalalka Carabta taasi u muuqata inay adkaatay ka did markii Iran ay saamayn toos ah Ku yeelatay Suuriya iyo Yemen.
Dalalka ayaa ah kuwo kasoo jeeda qabaa’il wada dhashay waxaana haatan muuqata in qalalaasihii ugu xumaa soo wajahay.
Maxaa keenay qalalaasahan?
Dalalkan dhammaantood ma ahan kuwo dimuqraadi ah inkastoo Qadar ay taageerto kooxaha dimuqradi doonka gobalka.
Khilafkan cusub waxaa uu soo baxay markii la jabsaday wakaaladda wararka Qadar islamarkaana amiirka dalkaasi kooxihii gabsaday ay dusha u saariyeen warar Qadar ay Ku sheegtay ‘been buur’. Wararkaasi waxaa ka mid aha amiirka Qadar oo amaanay Iran iyo Israel.
Baritaan ay sameeyeen FBI-da Maraykanka iyo laamaha sirdoonka Qadar ayaa lagu ogaaday in jabsashada wakaaladda wararka Qadar ay ka dambaysay Imaaraadka Carabta. Ujeedada waxaa lagu sheegay in ay doonayeen inay helaan wax ay marmarsiiyo ka dhigtaan si ay u go’doomiyaan Qadar.
Kaalin maku leedahay booqashadii Trump ee Riyadh?
Dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegay in hubaal la’aan madaxwaynaha Maraykanka uu lahaa kaalin aad ugu wayn in la go’doomiyo Qadar. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka Ku taageeray Sacuudi Carabiya iyo xulafadeeda.
Trump ayaa Sacuudi Carabiya la gaaray heshiis boqolaal billion oo dollar Ku kacaya taa bedelkeeda waxaa uu doonayay in Qadar uu ka helo heshiis kaa la mid ah taasi oo markii dambe u suura gashay, sida ay qaban dadka taxliiliya siyaasadda arimaha dibadda madaxwaynaha Maraykanka ee trump.
Waxaa la sheegay in wadamada Carabta ah ay markii hore ay xitaa qorshaynayen in ay qaadan talaabo militari hadii Qadar ay ka diido shuruudahooda.
Ma laga yaabaa in talaabadaasi militari Qadar uu ka badbaadiyay Turkiga?
Markii lagu dhawqay in Qadar dhul, Cir iyo Badba laga go’doomiyay waxaa markiiba Baarlamaanka dalka Turkiga ay ansaxiyeen in Dowladda madaxwayne Erdogan ay ciidan u diri karto dalka Qadar. Isla maalintaas waxaa Doxa ka dib ciidamadii ugu horeeyay ee Turkiga.
Qadar iyo Turkiga ayaa ah kuwo aad isugu dhow marka loo eego dhanka siyaasadaha arrimaha dibadda waana labada dowladood oo Kali ah oo aan aqoonsanayn xukumadda uu hogaamiyo Cabdul fatax Al-siisiga dalka Masar, ayagoo ka caraysan in ay xukunkii ka tuureen xukuumadii Masar ee sida dimuqraadiga ah ay usoo doorteen Masaarida.
Afgambigii xukuumadii Masar ee Maxamed Mursi waxaa ka dambeeyay Dalalka hadda go’doonka kusoo rogay Qadar. Sidoo kale dowladahan ayaa balaayiin dollar Ku bixiyay afgambigii dhicsoobay ee dalka Turkiga.
Arimahaasi ka dib waxaa Erdogan uu fahmay in dowladahan Reer galbeedka naasnuujiyada inay doonayaan inay dhibaayaan Qadar oo ah dalka ugu qanisan caalamka islamarkaana dhoofiya Gaaska ugu badan caalamka, waana dal dadkiisu ay ka yer yihiin dadka ku nool magaalada Muqdisho.
Turkiga ciimadiisa waxa ay Qadar ka badbaadiyeen in dalalka Carabta ah ee Qadar dariska la ah ay sameeyaan talaabo militari.
Dalalka Carabta maxay tahay sababta ugu wayn ay Ku qoonsadeen Qadar?
Jawaabtu waa TV-ga Aljazeera: TV gan Aljazeera intaan la furin ka hor dadka carbeed waxaa dalalkooda war ugu gayn jiray warbaahinta reer galbeedka. Markii la furay Aljazeera waxaa bilaabatay markii ugu horaysay in reer galbeedka iyo dowladaha ay xukumaan boqortooyooyinka carbeed in war guriyahooda loogu geeyo taasi oo reer galbeedka xitaa ay Qadar Ku dhibsadeen.
Qadar ayaa maalgalisa Aljazeera, waxaana Aljazeera ay si toos ah ay u tabinaysay banaanbaxyadii la baxay gugii Carabta kuwaasi lagu riday qaar ka mid ah hogamiyaashii ugu xoognaa dalalka Carabta waxaa ka mid ah Mucamar Qadafi, Libya zain al-caabidiin bin Cali, Tunisia iyo Maxamed Xusni Mubaarak , Masar. Wixii inta ka dambeeyay Maamulada Imaaraadka Carabta Sacuudi Carabiya iyo kuwo kale inay ka cabsadeen in biyaha ay godkooda ugu galo, taasi oo keentay inay cadaawad aad u xun ay u qaadan Aljazeera iyo Qadar.
Warbixintan waxaa ay ka turjumaysaa fikirka qoraaga oo Kali ah
Previous articleRa’iisul waraare Khayre oo markii 9 kormeeray dekadda Muqdisho iyo faah-faahino kasoo baxaya
Next articleMaxaa ka soo baxay shir Golaha wasiirada ay Muqdisho ku yeesheen